Khaladaad Kala Duwan Markaad Iswaafajinayso OST Faylka ku soo dir sanduuqa Boostada Sarrifka.
Bogga ugu weyn Products DataNumen Exchange Recovery Khaladaadka iswaafajinta
Khaladaad Kala Duwan Markaad Iswaafajinayso OST Faylka ku soo dir sanduuqa Boostada Sarrifka
Waxaad ka furi kartaa fayl galka khad la'aanta ah (.ost) faylka, laakiin kuma xirmi kartid iyaga iyo Serverka isweydaarsiga, ama lama kulmayo fariimo kala duwan oo qalad iswaafajin ah oo lagu muujiyey qoraalka iswaafajinta galka waxyaabaha la tirtiray.
Khaladkan micnihiisu waa adiga OST faylka waa musuqmaasuq, ama mid ama in ka badan oo fariimo email ah OST faylka ayaa waxyeeloobay howsha iswaafajintana iyaga ma sixi karto.
Haddii ay tahay hal ama dhowr farriimood oo khalad ah oo khalad keena, markaa mararka qaarkood si fudud ayaad u tirtiri kartaa farriimahan si aad u xalliso qaladka. Sidoo kale Microsoft ayaa bixisa OST Qalabka Hubinta Daacadnimada in hagaajin kara qaar ka mid ah khaladaadka yaraynta sidoo. Si kastaba ha noqotee, loogu talagalay most kiisaska, xalka ugu fiican ee looga hortagi karo luminta xogta iyo khaladaad dheeri ah ayaa la isticmaalayaa DataNumen Exchange Recovery, sida soo socota:
Xir Microsoft Outlook iyo wixii kale ee codsi ah ee marin u heli kara OST gudbiso.
Raadi OST faylka sababa qaladka. Waad go'aansan kartaa meesha feylku ku saleysan yahay hantida lagu soo bandhigay Muuqaalka. Ama isticmaal Search shaqada ee Windows si aad u raadiso ka OST gudbiso.
Kabsado xogta offline ee OST gudbiso. Isbedelka OST Faylka waxaa ku jira xog qadla'aan ah, oo ay ku jiraan fariimaha boostada iyo dhamaan waxyaabaha kale, ee ku jira sanduuqaaga Bedelka, kuwaas oo muhiim kuu ah adiga. Si aad u soo kabsato oo aad u samatabbixiso xogtan, waa inaad isticmaalka DataNumen Exchange Recovery si loo baaro OST faylka, soo kabso xogta ku jirta, oo ku kaydi faylka PST ee 'Outlook PST' oo aan qalad lahayn si aad uga wada heli karto dhammaan fariimaha iyo walxaha Muuqaalka si fudud oo hufan.
Kaydinta asalka OST gudbiso. Amaanka dartiis, waad ka fiicnaan laheyd.
Magacaabi ama tirtir asalka OST gudbiso.
Hagaaji qaladka. Hubso in dejimaha koontada emailka Exchange ee Muuqaalka ay sax yihiin, oo Muuqaalka ayaa si guul leh ugu xirmi kara server-kaaga Exchange. Kadib restart Muuqaalka oo dir ama ku soo dir e-mayladaada ku jira sanduuqa isweydaarsiga isweydaarsiga, taas oo u oggolaan doonta Muuqaalka inay sameyso feylal cusub oo galka ah oo toos ah oo iskudhafan xogteeda sanduuqa Isweydaarsiga. waana inaad tirtirtaa oo aad mid cusub abuurtaa, sida soo socota:
6.1 Xidho Microsoft Outlook.
6.2 Guji Start, kadibna guji Control Panel.
6.3 Guji U beddel aragtida caadiga ah haddii aad isticmaaleyso Windows XP ama noocyo ka sareeya.
6.4 Laba-guji Mail.
6.5 Gudaha Dejinta Fariimaha sanduuqa wada-hadalka, guji Muuji Profiles.
6.6 Xullo mid kamida astaanta khaldan ee liiska guji saar si looga saaro.
6.7 Ku celi 6.6 illaa dhammaan astaamaha khaldan laga saaro.
6.8 Guji Add si loo abuuro astaan ​​cusub oo loogu daro akoonnada emaylka iyadoo loo eegayo sida ay u dejisan yihiin serverka.
6.9 Start Muuqaalka iyo dib-u-waafajinta sanduuqaaga isweydaarsiga, waxaad ka heli doontaa dhibaatada baaba'aysa.
Soo dejiso xogta lagu soo celiyey tallaabada 3. Kadib OST Dhibaatada feylka waa la xaliyay, hayso cusub OST faylka loogu talagalay sanduuqa isweydaarsiga ee furan, ka dibna fur faylka PST ee lagu sameeyay tallaabada 3 oo leh Muuqaalka. Maaddaama ay ku jirto dhammaan xogta la soo kabsaday ee asalkaaga ah OST faylka, waad nuqulan kartaa waxyaabaha loo baahan yahay si aad u cusub OST faylka u baahdo.